Ilaahow, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Falimaha Rasuullada 1,9 ayaa naloo sheegay, "Oo markuu yidhi, Isaga kor buu u qaaday, daruur baa indhahooda ka qaaday." Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo su'aal fudud markan: Maxay tahay sababta? Muxuu Ciise sidan ugu qaatay? Laakiin inta aynaan taas gaarin, waxaan akhrinaa saddexda aayadood ee soo socda: “Oo markay daawadeen intuu jannada ku jiray, waxaa la jiray laba nin oo dhar cadcad la jiray. Waxay yiraahdeen: Rag reer Galili ah, maxaad meesha taagan oo cirka u fiirineysaa? Ciisahan, samada adiga laguu qaaday, ayaa soo laaban doona sidaad u aragtay isagoo samada u socda. Kolkaasay Yeruusaalem ku noqdeen buurtii la odhan jiray Buur Saytuun, oo waxay u dhowayd Yeruusaalem, oo sabti nasasho ah.
Qoraalkani wuxuu sharraxayaa laba shay: in Ciise jannada kor u aaday iyo inuu mar kale soo noqon doono. Labada xaqiiqadood waa ...
“Waxaa iskutallaabta laygula qodbay Masiixa,” ayuu qoray rasuul Bawlos (Gal 2,20:2,20), laakiin Bawlos kaliya maahan. Wuxuu Masiixu ku yidhi Masiixiyiin kale (Kolosay 6,4). “Waa nalagula aasay isaga,” ayuu warqad u qoray Romanka (Rooma). Maxaa ka socda halkan? Oo kulligood dadkan kuma wada joogin buuraha Yeruusaalem ku yaal. Muxuu Bawlos ka hadlayaa halkan? Masiixiyiinta oo dhan, ha ogaadeen ama ha ogaadeen, waxay wadaagaan iskutallaabta Masiixa.
Halkaas ma joogtay markii iskutallaabta lagu qodbay? Haddii aad Masiixi tahay, jawaabtu waa haa, waad joogi jirtay. Waan la joognay inkasta oo aanan ogeyn waqtigaas. Taasi waxay u muuqan kartaa wax aan micno lahayn. Waa maxay macnaha dhabta ahi? Casriga ...
Mid ka mid ah odayaashayada ayaa dhowaan ii sheegay in sababta ugu weyn ee uu u baabtiisay 20 sano ka hor ay tahay sababta oo ah wuxuu rabay inuu helo awoodda Ruuxa Quduuska ah si uu uga adkaado dembiyadiisa oo dhan. Ujeeddadiisu way fiicneyd, laakiin fahamkiisa ayaa xoogaa cillad lahaa (dabcan, qofna ma leh faham buuxa, waxaan ku badbaadi doonnaa nimcada Eebbe, in kasta oo fahankeenna qaldan yahay).
Ruuxa Qudduusku ma aha wax aan si fudud u noqon karno “rogrogno” si aan u gaarno “himilooyinkeenna ka sarreeya,” waana nooc xoog u sarreeya oo awooddeena wata. Ruuxa Quduuska ahi waa Ilaah, isagaa inala jira oo innagana ina siiya jacaylka, hubaasha iyo wada noolaanshaha uu Aabbuhu inoo inoogu sameeyo Masiixa. Masiixu wuxuu ku abuuray carruurtiisa, Ruuxa Quduuska ahna wuxuu ina siinayaa dareenka ruuxiga ah si tan loo aqoonsado (Rooma 8,16).